Onye isi obodo İmamoğlu: 'Anyị ga - atụ aro ma rụọ ọrụ na okporo ụzọ mmiri' | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMayor İmamoğlu: 'Anyị ga-enwe ọrụ ma kwadoro na akwa okporo ụzọ'
Mayor İmamoğlu: 'Anyị ga-enwe ọrụ ma kwadoro na akwa okporo ụzọ'
28 / 06 / 2019 34 Istanbul, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ụmụnna imamoglu ga-arụ ọrụ na okporo ụzọ na aro
İBB President Ekrem İmamoğlu kwuru na okporo ụzọ a rụpụtara na Fatih Sultan Mehmet Bridge wee kwuo, konusunda Ọrụ anyị banyere otu esi edozi nke a ga-agwa General Directorate of Highways. N'ihe dị ka taa, anyị etinyela ya na ihe omume anyị dịka mbipụta dị mkpa nke Istanbul. " Ekrem Imamoglu, onye isi obodo nke Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), malitere ngbanwe mbu ya taa mgbe o richara oru nke ugbo abuo. Ekrem İmamoğlu, onye kporo aka ya na ndi oru ya na ubochi mbu nke ngbanwe ya, duru uche gaa n'uzo ndi oru nke Fatih Sultan Mehmet di n'ihu n'ihu igwe.
Imamoglu kwuru, dika otu oge anyi rutere oru, enwere nsogbu nsogbu ahia n'ihi oru mmezi na mmeghari ohuru malitere na Fatih Sultan Mehmet Bridge. Anyị ga-atụ aro, ndụmọdụ banyere otu esi eme ka nke a sie ike nakwa otu esi edozi ya, na ịkwagharị na nsogbu ndị ọzọ, tinyere njem ụgbọ mmiri anyị ga-eme. Nke a ga-abụ otu n'ime nsogbu mbụ. Ọrụ 3 na Ministry of Highways and Transport na-arụ ọrụ a. Anyị nwere ndụmọdụ ụfọdụ banyere akwa na ebe ndị ọzọ. N'ihe dị ka taa, anyị etinyewo ihe ndị a na ihe anyị na-eme dị ka isiokwu dị mkpa nke Istanbul. Anyị ga-arụ ọrụ iji mee ka anyị na ụmụ amaala anyị nwee njikọ chiri anya iji kọwaa ụmụ amaala anyị niile na ọrụ anyị. Anyị ga-enwe ike ịnweta nzaghachi site na ụmụ amaala anyị, nke anyị na-apụghị ịhụ, nke ga-eme ka anyị nwee nnukwu onyinye.
"NKWU ỤLỌ NKWU NKE 100 BỤ EBE Malite"
"N'ezie, na atụmatụ 100 mbụ anyị na-eme kwa ụbọchị, anyị ga-ekwurịta banyere nhazi ọrụ ahụ ozugbo. N'ezie, anyị ga-enwe atụmatụ mmemme nke dabeere na iwu anyị ka anyị na ndị ọrụ anyị na ndị ọrụ dị ugbu a na-akpakọrịta. Ihe mbụ anyị n'ụtụtụ bụ ịnọdụ ala n'etiti ìgwè anyị na-ekwurịta banyere ya. Ek Ekra İmamoğlu gara n'ihu ikwu okwu ya dị ka ndị a;
Iz Anyị ga-amalite usoro ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Echere m na a ga-enwe nsogbu anyị ga-agbakọta ma kwuo banyere ihe niile gbasara ndị obodo Istanbul na obodo anyị. Na mgbakwunye na ọrụ ụlọ ọrụ anyị, ị ga-ahụ atụmatụ atụmatụ anyị maka ala ọma jijiji ahụ na ihe omume anyị dị mkpirikpi na nke okwu. Ihe ọzọ bụ mbipụta gbara ọsọ ndụ anyị kwupụtara n'ebe niile. Anyị ga-amalite ngwa ngwa ịzụlite azụmahịa n'ime usoro iwu nke mba ụwa maka ndị obodo Istanbul na ịmepụta atumatu dị elu na ụlọ ọrụ anyị dị ugbu a na ụlọ ọrụ na ndị enyi ndị ọzọ anyị ga-agbakwunye site n'èzí nke nzukọ ahụ na kwadoro ụlọ ọrụ dị mkpa nke steeti anyị. Nke a na-eme ka ihe omume ndị a na-akpọkarị ma kpasuo anyị iwe n'ugbo. Anyị ga-abụ obodo nke na-ege ntị n'olu ndị anyị. N'ezie, ala ọma jijiji ahụ bụ ihe kacha mkpa anyị. "
ANYỊ NA-AGBANYE NDỊ NA-AGBANYEGHỊ ỤLỌ BAỊBỤL KWESỊRỊ ỤWA
Ekrem İmamoğlu nyere azịza na-esonụ n'ajụjụ a: atama Na ụda nke Ministry nke ahia, ikike ịhọpụta na-esi n'aka ndị nwe obodo wepụtara ma nye ndị isi obodo ahụ ma ụlọikpe ahụ kwadoro okirikiri ahụ:
"Nke a abụghị okwu ọhụrụ. Obodo ọ bụla ugbu a nwere ụlọ ọrụ, enyemaka. Otu okirikiri banyere òkè nke obodo niile. N'ezie, Istanbul na Ankara na-ebute ụzọ. Na Ankara, enwere mkpebi maka obodo Ankara Metropolitan Municipality. O doro anya na ikike dị n'iwu ahụ bụ onye. O doro anya na ịkọ ikike nke onye isi obodo na kọmitii obodo ahụ akwadoghị. Ọ dịghị mkpa ka ndị obodo niile gụọ ma rụzie ikpe ụlọ ikpe. N'ụzọ doro anya, anyị achọtaghị ozi ahụ zitere ma nata okirikiri. Anyị ga-etinye aka na General Directorate of the Local Authorities maka okwu a. Anyị dọrọ gị aka ná ntị. Weil na-achọ maka ikikere iwu anyị. Olileanya na a ga-enyeghachi nlọghachi. Amaara m na iwu ahụ ga - enyere anyị aka wepụ ya. Enwere m olileanya na a edozi nsogbu a n'ihi na anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị enyemaka. Ndị enyemaka anyị na-ekpuchi 3 nke mmefu ego nke Istanbul fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na 2. Iji nwee ike ijikwa IMM, iji rụọ ọrụ ndị metụrụ nwa amaala aka, gafee ebe ndị a. Anyị ga-eso ụlọ ọrụ ndị dị mkpa iji wepụ mmegharị a ozugbo enwere ike. Anyị ga-emekwa atụmatụ nke iwu anyị. Anyị nwere olileanya dị elu na a ga-agbanwe ya ngwa ngwa. "
"NDỊ ỌTỤTỤ NA MGBASA NA-AGBANWE YA GA-AGBA"
Imamoğlu kwuru na ha ga-agwa ụmụ amaala niile ọrụ niile ha ga - eme ma mee ka ndị amaala nke Istanbul nwee njikọ chiri anya ma kwuo, sị: ız Anyị ga - enwe nzaghachi na ụmụ amaala anyị apụghị inye aka na anyị. Echere m na anyị ejirila ụbọchị 5 nọrọ otu ụbọchị ọnụ ebe anyị ga-etinye ụbọchị dị mma na ọrụ dị mma. Dị ka Mayor nke obodo ukwu, m na-echekwa banyere nkwurịta okwu na pịa. Achọrọ m ka ị bụrụ onye ndu na ihe ndị kacha mkpa na Istanbul. Nke a bụ ma agwa m ma àgwà m chere na ọ ga-abụ ụlọọrụ. Ya mere, achoro m ka a ga-enwe mmekorita a n'uzo obula mgbe nke a malitere. "
"ANYỊ GA-EBI EZIOKWU EZIOKWU NA ỤMỌ NA ISTANBUL"
Imamoglu, "Na ụbọchị ndị a, ụfọdụ ndị ọrụ na mgbasa ozi ọha mmadụ ahapụlarị" bụ ajụjụ ọzọ: "Ọ bụrụ na enwere ike ịchụpụ ya, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ị na-anata ụgwọ ugbu a site na Metropolitan Municipality, ya mere a ga-enyocha okwu abụọ a. Na mgbakwunye, n'ime ọkara na ọnwa abụọ, e nwere ụfọdụ akụkọ gbasara anyị. Site na ndị enyemaka, anyị ga-enyocha okwu a ọzọ. Ọ dị mma? Kedu ụdị omume e tinyeworo maka nyocha, ule, ajụjụ ọnụ, ụdị nyocha, ụdị ajụjụ ndị e kpochapụrụ? Weil na-ele anya ha niile. Anyị na-eleba anya banyere nsogbu ndị a n'ihi na anyị kwere nkwa na anyị ga-eme ihe ziri ezi ma na-eme ihe dị mma. Ọ dịghị mgbe ọ bụla onye ọ bụla na-eji ụgbụ. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ọ bụ nnọkọ oriri na ọṅụṅụ, ọ bụ otu onye ọzọ. Iji mee ka ikpe ziri ezi na ụlọ ọrụ a, ị ga-ahụ ntụgharị uche anyị na nke a na usoro nghọta. Anyị ga-eje ozi n'ihu gị. N'ezie, ọ bụrụ na anyị adịghị emeri mmetụta a na-ezighị ezi n'etiti ọha mmadụ, ọrụ, ọrụ, ohere anyị nwere inweta udo nke ọha na eze siri ike. Iji wezuga echiche a nke ikpe na-ezighị ezi kpamkpam, anyị ga-enye ezigbo aka na ikpe ziri ezi na mpaghara a. Agwara m ndị enyi m ka ha ghara ịhapụ ụkpụrụ ndị a ruo ọgwụgwụ. Anyị ga-edozi ụfọdụ ọrụ na azụmahịa site na ịme ajụjụ ndị a
İmamoğlu: 'Anyị Ga-enwe New Metrobus Lines'
Minista Ersoy: 'Ndagwurugwu Ihlara n'ihe metụtara ụgbọ ala…
Onye isi oche Tuna, New Nation Square Work İlgili
Onye isi ala Akşener ya na onye ọrụ 3 TCDD jidere…
Mayor Aktaş, Banyere ationgbọ njem na Bursaray…
Maazị Altay na Konya Metro na Mmefu ndị ọzọ…
Ọrụ na Fatih Sultan Mehmet Bridge
85 Pasent nke Ọrụ na Gaziray Gbanyere Nweta Nweta
Edere Intersection aha na Çaykışla